Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa UAE » Nnukwu ihe gbawara na-ama jijiji na Dubai
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • News • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Ekwupụtabeghị ókè mbibi ihe mgbawa ahụ mere n'ọdụ ụgbọ mmiri na ibu ndị gbara ya gburugburu dị.
A na -enwe mkpatụ nke mgbawa ahụ n'ofe Dubai.
Ihe mgbawa ahụ mere ka nnukwu ọkụ gbata na mbara igwe.
Enwebeghị akụkọ ozugbo gbasara mfu ma ọ bụ oke mmebi.
Ndị bi na Dubai kọrọ na ha nụrụ nnukwu mgbawa gafee obodo ahụ na mbubreyo Wenezde, ebe ụfọdụ ndị hụrụ anya biputere eserese na foto nnukwu bọọlụ na -efefe n'ọdụ ụgbọ mmiri dị na Dubai.
Dị ka ndị ọrụ gọọmentị obodo ahụ siri kwuo, nnukwu ọkụ malitere n'ime akpa echekwara n'ụgbọ mmiri kwụsịrị n'ọdụ ụgbọ mmiri Jebel Ali, ebe nnukwu mgbawa na -ama jijiji na nnukwu obodo UAE.
Ndị ọrụ gọọmentị kwuru na enweghị akụkọ gbasara ọnwụ. Ekwupụtabeghị ókè mbibi ihe mgbawa ahụ mere n'ọdụ ụgbọ mmiri na ibu ndị gbara ya gburugburu dị.
Ọkụ ahụ buru oke ibu nke a hụrụ site n'ofe ọdụ ụgbọ mmiri, dịka vidiyo na -ekerịta na soshal midia.
Ihe onyonyo ndị ọzọ gosiri ndị ọrụ mberede nke Dubai na -anwa iji ikpo ikpo ọkụ gbasasịrị n'ọdụ ụgbọ mmiri dị n'akụkụ ụgbọ mmiri ahụ metụtara, ọdọ mmiri ọkụ ka na -erekwa n'akụkụ ihe yiri mkpọmkpọ akpa.
Enwetabeghị mmerụ ahụ ọ bụla ruo ugbu a, gọọmentị Dubai kwuru na mmelite ọzọ. Edebere otu ndị ọrụ nchekwa obodo Dubai ka ha gbanyụọ ọkụ ahụ, ọ gbakwụnyere, na a chịkwara ọkụ ahụ.
Ọdụ ụgbọ mmiri Jebel Ali dị na Dubai bụ nke kacha ibu n'ụwa na nke kachasị na Middle East. Ọ na -ebuga ibu sitere na okpuru ala India, Afrịka na Eshia. Ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, nke DP World na -arụ, nwere ọdụ ụgbọ mmiri anọ na -agbasaghị agbatị nke nwere ike ibute ụfọdụ nnukwu ụgbọ mmiri ụwa.